Faarax Jaamac Yuusuf (faaraxow) oo maanta wareysi siiyay SRTV. - Hargeele - Wararka Somali State
November 18, 2019 179
Wareysigan oo dhinacyo badan taabanayaa ayuu Faarax kaga hadlay, xaalada uu maanta deegaanku marayo, fursadaha muuqda, iyo mustaqbalka ay tahay in ummada loo jiheeyo,.
Faaraxow, oo xilal badan ka soo qaybtay deegaanka, ayaa isbar-bardhig ku sameeyay xaaladihii siyaasadeed ee qalafsanaa, ee uu deegaanku ku jiray sanad ka hor, iyo maanta oo siyaasad fur-furaansho ee ka jirto dalka iyo deegaankaba, waxaa uuna ka hadlay oo kale, cadaalad daradii siyaasadeed ee haysatay shacabka Soomaliyeed ee deeganka, iyo sida ay dad wajibaadkooda gabay inay ka dhiidhiyan bahdilkaa siyaasadeed ee xiligaas, ay maanta oo bilow fiicani jiro, ay raabaan inay xagal-daaciyaan, waxa uuna gabogabadii baaq u diray axsaabta siyaasadeed ee deegaanka.
Faaraxow, oo mar ka mid ahaa gudiga fulinta ee xisbiga ayaa xusid mudan, inuu ka mid ahaa xubnihii xiligaas, ee isku dayay, inay xilka ka qaadaan Cabdi Maxamud Cumar, madaxweynihii hore ee deegaanka, hasa ahaate dano siyaasadeed oo xiliga jiray awgood at ku guul daraysteen inay xilka ka qadaan.
Dadweynaha ku dhaqan cidhifyada magalaada Jigjiga oo ka cabanaya adeegyada qaarkood oo aan jirin.
Xuska todobaadka cadaalada oo Jigjiga ka furmey.